एनआरएनए निर्वाचनमा अब कागजी मतदान – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ आश्विन २०७७, आईतवार ००:११ English
काठमाडौँ, ३० असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनमा अब अब कागजी प्रक्रियाबाट मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन समिति सदस्य केपी पाण्डेले प्राविधिक कारणवस कागजी प्रक्रियाबाट मतदान हुने जानकरी दिए । आज बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदान हुने बताएका छन् । कागजी प्रक्रियाबाट हुने मतदानको लागि नमुना मतपत्र समेत सार्बजनिक भईसकेको छ ।
बुधबार बेलुका अबेर गरी भोटिंग मेसिनबाट नै मतदान सुरु भए पनि प्राविधिक समस्या आएपछि मतदान स्थगित भएको थियो । मतदान स्थगित भएपछि आक्रोशित प्रतिनिधिहरुले कुर्सि टेबल तोडफोड गरेका थिए ।
निर्वाचनमा ७६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ४२ पदका लागि ७६ ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्षमा कुमार पन्त र कुल आचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसैगरी महासचिवमा जानकी गुरुङ र डा. हेमराज शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचनमा करीब दुई हजार ४ सय मतदाता सहभागी हुनेछन् ।
‘म, मेरो एनआरएन र मेरो नेपाल’ भन्ने नाराकासाथ मङ्गलबारदेखि सुरु भएको संघको नवौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् । सम्मेलनको बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समापन गर्ने छन् ।
३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:४२ मा प्रकाशित